२०१८ को सुरुवातसँगै बलिउडमा सलमानसँग भिड्दै छिन् ऐश्वर्या - Everest Dainik - News from Nepal
२०१८ को सुरुवातसँगै बलिउडमा सलमानसँग भिड्दै छिन् ऐश्वर्या
२०७४, १८ पुष मंगलवार
मुम्बई, पुस १८ । गत वर्षको सुरुवातमा बक्स अफिसमा शाहरुख खानको रइस र ऋतिक रोशनको काबिलबीच कडा टक्कर भएको थियो ।
यी दुर्इ चलचित्रबीच भएको कडा प्रतिष्पर्धामा रइसले काबिललार्इ पछि पार्न सफल भयो । र सुपारस्टार शाहरुखले राम्रो सफलता हात पारे ।
याे पनि पढ्नुस राजपालको भिडियाे हेर्नुस्
यस्तै, नयाँ वर्ष २०१८ मा पनि फेरि दुर्इ चलचित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छन । सलमान खान– जैकलिनको ‘रेश ४’ र ऐश्वर्य –अनिल कपुरको ‘फन्ने खां’ आगामी जूनमा रिलिज हुने तयारीमा छन् ।
यस्तै १४ अप्रिलमा भारतको महँगो चलचित्र २।० रिलिज हुने छ भने त्यही समयमा वरुण धवनको चलचित्र ‘अक्टुबर’ पनि रिलिज हुने बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सुपरस्टार सलमान खानका यी १० फिल्म किन रिलिज भएनन् ?
यी दुई चलचित्रबीच पनि कडा टक्कर हुने चलचित्र पण्डितहरुको अनुमान छ । अरु धेरै चलचित्रहरु छन्, जुन २०१८ मा एक साथ रिलिज हुने तयारीमा रहेका छन् ।
यस्तै, नयाँ वर्ष २०१८ को सुरुवातसँगै अरु कुन कुन चलचित्रबीच हुने छ त कडा टक्कर ?
याे पनि पढ्नुस सुपरस्टार अमिताभ वच्चन किसानहरुका लागि बने भगवान !
रुकुम घटनामा बेपत्ता शाहीको शव फेला